तपाईंको मूत्र सुरक्षित कसरी रंग्ने हो?
कसरी रंग राइन
रंग रसायन विज्ञान रङ को लागि आवेदन
के तपाईंले कहिल्यै आफ्नो मूत्र रङ गर्न चाहानु भएको छ वा सोचेको कारणले मूत्रलाई रंग लगाउँछ? यदि छ भने, तपाइँ भाग्यमा हुनुहुन्छ! तपाइँको मनोरञ्जन र प्रयोग खुशीको लागि यहाँ लागू गरिएको सानो रसायन शास्त्र हो:
बैंगनी - बैंगनी या बैंगनी तरल कुनै चीज छैन जुन हरेक दिन शौचालय कटोरा मा देख्छ। तथापि, तपाईं बैट (रातो) र मेथाइलिन नीलो डाई (निलो) दुवै खानुहुन्छ भने तपाईले बैजनी वा बैंगनी मूत्र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
मिथाइल नीले कम मात्रामा सुरक्षित छ।
नीलो - मेथाइलिन नीलो तपाईंको मूत्र नीलो र हरियो रङ निलो पार्छ। यसले तपाईंको आँखाका नीलाहरू निलो पार्न सक्छ। दुवै मूत्र र अनुहारको रंगान्तरण उल्टाउने छ। एक पटक माथाइलिन नीलोलाई मलेरिया विरुद्ध प्रभावकारी उपचार मानिन्छ। जहाँसम्म मूत्र रङगहरू जान्छन्, यो एक उचित रूपमा खानेकुरा सुरक्षित मानिन्छ, तापनि तपाईंलाई सजग हुनु पर्छ केही मानिसहरू मेथाइलिन नीलोमा एलर्जी हुन्छ। खाद्य रंगले तपाईंको मूत्र निलो पार्छ। एक दुर्लभ, विरासतित रोग पोफीफेरीको रुपमा चिनिन्छ नीलो मूत्र उत्पन्न हुन सक्छ। राजा जर्ज III को नीलो मूत्र को porphyria को लागि जिम्मेदार हुन सक्छ।
हरियो - एस्पारागस मूत्र हराउँछ र यसले यसलाई धेरै बलियो गन्ध दिन्छ (यद्यपि सबैले यसलाई गहिरो पार्न सक्दैन )। खाद्य रंग तपाईंको मूत्र हरियो को रूप मा बदल सकते हो, जस्तै केहि दबाइहरु।
पहेंलो - त्यो मूत्रको सामान्य रङ्ग हो। यदि तपाईंको पेशा रङ हेर्न धेरै पीला छ भने, यसको मतलब तपाईं ओभर-हाइड्रेटेड हुनुहुन्छ।
यदि तपाइँसँग रङहीन मूत्र अझैसम्म पहेंलो टन्ट चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ एक भिटामिन बी 12 क्याप्सुल लिन सक्नुहुन्छ। अर्को विकल्प, जुन अत्यन्त छिटो छ, एक रंगीन ऊर्जा पेय पिउन छ। जोडा बी भिटामिन समावेश गर्दछ को लागी हेर्नुहोस्।
एम्बर - डार्क सुनहरा मूत्र प्रायः निर्जलीकरण को परिणाम (पर्याप्त पानी न पीने को)।
धेरै अँध्यारो रंगले मूत्रमा पित्तको उपस्थिति देखाउन सक्छ, जुन एक चिकित्सा अवस्था को लक्षण हो। पीला मूत्रलाई सुरक्षित रूपमा सुरक्षित गर्न, बी भिटामिन लिने प्रयास गर्नुहोस्। एक खानेपानी पिउन पिउन मद्दत गर्नेछैन, किनकी क्याफिन डेरिरेटिकको रूपमा कार्य गर्दछ, आफ्नो मूत्रमा थप पानी थपेर र रंगीन बनाउँदछ तर पीला।
नारंगी - खाने को रूबाराब या सेन्ना आफ्नो मूत्र नारंगी बदल सकते हो। सेन्नासँग गम्भीर रूपमा एक खतरनाक जडीबुटी हो। रोबर्बको साथ रहनुहोस्।
रातो भोजन खाने वा कालोबेरीले तपाईंको मूत्र रातो बारी गर्न सक्छ। ब्लूबेरी पनि टिन्ट मूत्र गुलाबी गर्न सक्छ। यद्यपि जामुन नीलो हो भने, यिनीहरु मा वर्णक एक प्राकृतिक पीएच संकेतक हो जुन रंग बदल्छ। बिहानको मूत्रको सामान्य पीएच केहि अम्लीय हो जुन बिहानको पहिलो कुरा हो, त्यस पछि पछि केही थोडा अल्केलिन को लागी ट्रान्सफर। खाना खाएर खाना खाएर तपाईंको मूत्रको रंगलाई तपाईंले खाएको दिनको समयमा प्रभावित हुन सक्छ।
गुलाबी - गुलाबी एक मूत्र पथ संक्रमण बाट वा सानो मात्रामा बीट वा कालोबेरी खाईन सक्छ।
ब्राउन - ब्राउन मूत्र एक गुर्दे रोग, पीला, या जडीबुटी सुननेल को ओवरडोज देखि नतीजा। तपाई सम्भवतः यो रंगबाट टाढा हुनु पर्दछ, यदि सम्भव छ।
कालो - कालो तपाईंको मूत्रको लागि राम्रो रंग होइन। तपाईंले यसलाई ब्ल्याक वाटर फेभबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ, जुन मलेरियासँग सम्बन्धित छ।
कालो रंग तपाईंको रक्त कोशिकाओं को ठूलो मृत्यु देखि आउछ, (सामान्यतया) पीडितको मृत्यु को लागी।
दूध वा हिमपात - मूत्रमा रक्त, प्रोटीन, वा प्यासबाट यो परिणाम हुन्छ र सामान्यतया एक रोगलाई संकेत गर्दछ। यो कुनै प्रभाव छैन जुन तपाईंले खाना वा केही विषैले पिउने गरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
स्पष्ट - यो सबै स्पष्ट मूत्र प्राप्त गर्न खोज्छ धेरै पानी पिउन। ओभरबोर्ड नजानुहोस्, किनकि धेरै पानी तपाईंको लागि खराब हुन सक्छ।
यदि तपाईं आफैंको लागि यी मध्ये कुनै पनि प्रयास गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, रसायन सँगसँगै सुरक्षा जानकारी र सामान्य ज्ञान प्रयोग गर्न निश्चित हुनुहोस्। यदि तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाइँ एक रोगको कारण रंगीन मूत्र छ, स्वास्थ्य हेरविचार पेशेवरलाई परामर्श गर्न निश्चित हुनुहोस्।
यी मजा रसायन विज्ञान प्रदर्शन र अनुभवहरू प्रयास गर्नुहोस्
प्राथमिक भौतिक विज्ञान मेला परियोजना विचार
कसरी एक कोकोकोल क्रिस्टल गार्डन विकास गर्न
इथानोल वा मस्तिष्कको रक्सी कसरी वितरण गर्ने?
उच्च विद्यालय विज्ञान प्रयोग
कसरी अङ्ग्रेजी क्रिस्टल बढ्नुहुन्छ
धुम्रपान बम सुरक्षा
एटच-ए-स्केच थर्माइट कसरी बनाउने
कसरी चमक प्रिन्टर मसी बनाउने
शीर्ष इटालियन शब्दकोश
यहूदीहरूको मुस्लिम विचार
सर्दीको दौडान कहाँ कीराहरू जान्छन्?
तपाईं सजिलै संग मास्टर गर्न सक्नुहुन्छ मानिसहरूको अपवाद चित्र
फ्लोरिडाका दासत्वबाट कसरी काले सेमिनार पाइन्छ?
खराब पुराना दिन - फर्श
U - फ्रेंच को U यू
एक समायोज्य स्टेम संग बाइक हैंडबैब मुद्दा सुलझाने
माइक्रोवेव विकिरण परिभाषा
जेथ्रो टल र बीज ड्रिलको आविष्कार
8 प्रकारका सेतो रक्त कोशिकाहरू
10 तथ्याङ्कहरु को बारे मा
वारेन विल्सन कलेज प्रवेश
प्रतिस्पर्धात्मक बजार के हो?
शीर्ष 10 गुलाबी प्यानर / निरीक्षक क्लौउउउउ हास्य
नयाँ धार्मिक आन्दोलनहरूको रेखाचित्र
आविष्कार र रकेटहरूको इतिहास
'रेटिङ ट्रिपिंग' क्यारेक्टरहरू
सेना मा महिलाहरु मा शीर्ष पुस्तकहरु
महत्वपूर्ण चित्र उदाहरण समस्या
कहिले र कहाँ गोल्फ सुरु भयो?